WAXAANU KOR U QAADNAA MIISAANKA: BEERASHADA IYO DARYEELKA GURIGA - CROCUS
Ugu Weyn Ee Crocus
Qarsoonaanta beerashada iyo sii kordhaya ee guriga
Xilliga qaboobaha, hindhicirrada hindhistu waxay abuuri karaan jawi xafladeed qolka. Isticmaalida hababka gaarka ah, waxaad ku gaari kartaa ubaxadooda waqti go'an, tusaale ahaan, Sannadka Cusub. Xoogsheegashadu waa dhirta noocaas ah, laakiin beeritaanka iyo daryeelidda guriga waxay u baahan yihiin aqoon iyo dadaal.
Crocus ama saffron - sharaxaadda ubaxa
Crocus ama Saffron - Geedka geedka dilaaga ah. Burooyinkeeda xayawaanku waxay u eg yihiin tulips yar. Midabka ubaxa waa kala duwan yahay: caddaan, lilac, guduud, jaalle. Noocyada Hybrid waxay yeelan karaan midabyo laba xabbadood. Marka geedka ubaxu uu furo, gudaha waxaad arki kartaa sadax huruud ama orange. Caleemaha waa mid cidhiidhi ah, cagaar mugdi leh xidid cad oo ku yaal bartamaha. Iyo caleemaha beerta, iyo sida ubax guri, iskudhufka u muuqda mid aad u qurux badan, waxaad u baahan tahay inaad hesho kala duwanaanta saxda ah.
Ma taqaanaa? Magaca "Miisaanka" waxa uu ka yimid Giriigga "thread", iyo "sacfrore" - oo ka yimid Carabiga "jaalle".
Xulo dhejis xoog leh
Si aad u beerto dhirta guriga, waxaad u baahan tahay inaad doorato dheriga ugu haboon dhirta. Nalalka waa inaysan la xiriirin derbiyada dheriga iyo midba midka kale, sidaas awgeed waxay ku xiran tahay tirada qorsheysan ee dhirta (badanaa laga bilaabo shan ilaa toban). Doorashada ugu wanaagsani waa dherer ballaaran oo ah qaabka baaquli leh derbi hoose. Gaar ahaan qashinka xoogga leh waxaa ku jira weelal wareegsan oo leh godad for sprouts.
Waa muhiim! Si laysku dhejiyo waxay u egyihiin mid iswaafaqsan, hal koob oo dherer ah waxay ka fiican tahay in lagu beero nalalka isla noocyada iyo cabbirka la midka ah.
Xulashada carrada loogu talagalay safka
Boodhadhku waa inuu noqdaa mid dhexdhexaad ah, iftiin iyo si fiican u miiray, sababtoo ah joojinta qoyaanku waxay keenaysaa cirbadaha nalalka. Doorashada ugu fiican waxay noqon doontaa substrate dukaanka dukaanka. Waxa kale oo aad diyaarin kartaa isku-dhafan oo isku-dhafan oo isku-dhafan, caws iyo qoryo isku mid ah.
Noocyo kala duwan oo lagu kala dooran karo
Kobcinta wanaagsan iyo horumarinta xakamaynta, ma aha oo kaliya abuurista iyo daryeelka caafimaad ee muhiimka ah, laakiin waliba walxaha beeritaanka tayo sare leh. Waa inaad doorataa nalalka adigoo aan dhibco, qallalan iyo waxyeello farsamo. Haddii cilladaha qaarkood ay weli muuqdaan, waa in laga saaraa goobta oo ay waxyeeleeyeen dhuxusha ama dhuxusha waa in la nadiifiyaa. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad nadiifiso nalalka miisaanka iyo xididdada.
Iibsashada nalalka dukaanka, waa inaad fiiro gaar ah u yeelatid tirada baaxaddeeda. Badanaa, maaddada waxaa loo kala soocaa wareegga mitirka mitir sida waafaqsan heerarka caalamiga ah ee lagu qiyaaso dhirta dabka. Nalalka crocus leh wareega ah 5 illaa 10 cm waxaa lagu gartaa lambarrada soo socda ee qiyaasta bulaacada (tilmaamaya dhexroor):
5 / 7- 1.6-2.2 cm;
Markaad sii kordhiso dhajinta dheriga, waxaad ka filan kartaa hal ubax dhirta oo leh cabbir 7/8, oo leh cabbir 8/9 - 2-3 ubax, leh cabbir 9/10 - 3-4 ubax.
Beelaha waaweyn ee Holland waxay ku qoran yihiin 10 / + waxay bixiyaan 5-6 ubax. Waxay ku habboon yihiin beerashada guriga: waxay naftooda u dhiibaan distillation iyo ubaxyada ubaxyada waaweyn.
Waa muhiim! Galka weyn ee guluubka xajmiga ee cabbirka, inta badan dhirta waxay soo saari doonaan ubax waxayna sii dheeraanayaan.
Beerto iyo dhirbeyn
Nalbooyinka ayaa ah waxyaabaha ugu caamsan ee beerto, maaddaama ay xoogga saaraan abuurka ayaa aad ugu adag in ay dacaayadiyaan habkani waa mid aan loo adeegsan karin floriculture. Warshad noocan oo kale ah ayaa ubaxi doonta oo kaliya 4-5 sano. Sannad kasta cormer jir ah wuu dhimanayaa, meelkeeduna waxay koraan basasha cusub.
Ka hor intaan la beerto dufanku, alaabada beerta la iibsaday waa in la qaboojiyaa.. Nalalka dukaanka ayaa inta badan la qalajiyey, waxay u baahan yihiin oo kaliya heerkulka qolka dhowr maalmood ka dibna lagu meeleeyaa qaboojiyaha.
Haddii nalalka laga soo qaado sawirka, habka diyaarinta waxay noqon doontaa mid dheer. Ka dib marka la qodo bisha Juun, nalalka waa la qalajiyaa lana kala soocaa. Marka hore, waa in lagu kaydiyaa heerkulka sare, si tartiib tartiib ah u yareeyo (min 34 ilaa 20 digrii). Ka dib 2 toddobaad, hoos u dhig heerkulka, deji qaabka 17 darajo. Xaaladahan oo kale, wax waliba waa la keydiyaa ilaa qeybta labaad ee bisha Agoosto, ka dibna habka qaboojinta uu bilaabo. Qolal qalalan oo mug leh oo heerkulkiisu yahay 4-9 digrii ama qaboojiyaha, nalalka waxaa lagu kaydiyaa warqad qaro ah ilaa bil ah.
Waa muhiim! Beeralayda khibrad leh waxay isticmaalaan habka beerto "beerashada sanduuq adag". Carrada iyo lakabka ciidda waxaa lagu meeleeyaa weel, nalalka waxaa lagu beeray oo daboolay lakabka labaad ee ciid. Sidaa darteed, xididdadu waxay ku jiraan carrada nafaqo leh, iyo nalalka waxaa laga ilaaliyaa ka soo lumay.
Beerto waxaa la sameeyaa 70-90 maalmood ka hor taariikhda ubax ee qorshaysan. Ka dhig lakabka dufanka hoose ee hoose ee dheriga. Nalalka waxaa la geeyaa ciidda diyaarisay gebi ahaanba ama ka tagaysa "dabo" yar. Dheriga leh geedo nadiif ah 2 bilood oo mugdi ah qabow (5-8 digrii) meel loogu talagalay biqilka.
Kordhinta dhirirka dheriga
Ku dhejinta guriga waa la koray adoo qasaya.
Marka sprouts ay xoog ku filan tahay oo ay gaareen dherer 3-5 cm, dheriga waa in la keenaa iftiinka iyo heerkulku waa inuu yahay 10-15 digrii. Xaaladaha wanaagsan, sacfraan wuxuu ku jiri doonaa laba toddobaad.
Ma taqaanaa? Distillation waa geedi socodka keenidda geed qashin ah oo ka mid ah dormancy for ubax ah wakhti aan caadi ahayn, oo lagu fuliyey saameyn of arrimaha jirka - heerkulka, qoyaan, iftiin.
Bixinta daryeelka qaar ka mid ah daryeelka ka dib markii ubax guriga, waxaad sii dheereyn kartaa noloshooda. Mar labaad markii la bakhtiiyo, dhirta sida caadiga ah lama duubo, laydhuna waa la tuuraa, laakiin haddii lagu beeray dhul furan, "carruurta" ayaa iyaga u sameyn doona. Basal si fiican loo ilaaliyo ayaa looga baahan yahay dib u soo kobcin. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad ku quudiso ciidda dharka sare iyo si joogto ah u biyo waraabiyo ilaa caleemaha jaale noqdaan iyo dhacaan. Markaas nalka waa in laga saaro, laga nadiifiyo dhulka oo lagu keydiyaa meel mugdi ah, meel qallalan ah oo loogu talagalay beerto dheeraad ah xilliga dayrta.
Crocus ma jeclaanayo qoyaan xad dhaaf ah oo u adkaysta abaarta, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad waraabiyo dhirta si dhexdhexaad ah, 2-3 jeer usbuuciiba marka qallajinta dhoobo. Inta lagu jiro ubax, dhirta waa in lagu waraabiyaa digsi, oo ka saara dareere badan oo nus saac ka dib waraabinta.
Inta lagu jiro beeritaanka dhirta uma baahna inay bacrimiso. Potash iyo Bacriminta Fosfatiga ayaa ah kuwa ugu faa'iido badan horumarka iyo ubaxyada xakamaynta. Bacriminta waxaa lagu sameeyaa soo bixitaanka caleemaha (oo ah saamiga 2: 1), inta lagu guda jiro dhismaha burooyinkeeda iyo kadib ubax (qaybo siman). Isticmaalka Bacriminta nitrogen laguma talinayo.
Daryeel ilmo dhaadheer
Si aad u ogaatid sababta isbeddelku u istaagay ubaxu, waxaad u baahan tahay inaad falanqeeyo xaaladaha dayactirka. Ha ilaawin in khamradu ay tahay guga "boot", oo laga yaabo in uusan jeclayn heerkulka (20 digrii ama wax ka badan) ama iftiinka qolka waa mid aad u iftiimaya. Si aad u dheeraato ubaxa qolofta guriga, waxaad u baahan tahay inaad ka qariso qorraxda tooska ah ama iftiinka iftiinka iftiinka iyo xaji heerkul qabow (14-16 digrii, habeenkii - xitaa ka yar 0). Xaaladaha saxda ah, noocyo kala duwan ayaa lagu qurxiyo ilaa saddex toddobaad.
Ma taqaanaa? Saffron waa mid ka mid ah dhirta ugu qaalisan adduunka. - laga sameeyay dharka qallalan ee ubaxyada cagaarka. Si aad u hesho kiilo dhir udgoon, waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato 200,000 dharka ubaxa. Qodobka sare ee waxsoosaarka caalamka ee dhirta (90%) ayaa iska leh Iran.
Guga-ubaxa iyo dayrta-ubaxaan, wareegyada horumarka iyo, marka loo eego, wakhtiga beerto ma aha mid u dhigma: Guga waa in la beeray Sebtember, iyo dayrta - xagaaga. Marka aad iibsanayso wax beerashada, hubi inaad taxaddar u yeelatid wakhtiga miyir-beelka. Xakamaynta xilliga guga waxaa badanaa loo isticmaalaa qasbo.
Haddii aad ku shubto hal nalal weel oo noocyo kala duwan ah, iyo dherer ahaan, waxay ku jiri doonaan waqtiyo kala duwan oo leh ubaxyo kala duwan, oo u muuqda inay yar yahiin.
Noocyada dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee ubaxu ma aha mid aad u qurux badan, xitaa daryeel taxaddar leh, ubaxku wuxuu noqon doonaa mid yar. Waxaa fiican in ay iyaga ku beerta beerta, iyo dhaqanka dheriga ah waxaa lagu talinayaa in ay doortaan noocyo waaweyn oo ubax leh.
Caleemaha hurdi waa calaamad muujinaysa chlorosis. Cudurkaasi waa natiijo ka timid dhaawaca gogosha ama xaaladaha aan fiicneyn (dheecaan xumo, nafaqo darro). Waxaad isku dayi kartaa inaad yareyso yareynta waraabinta.
Cayayaanka Crocus iyo Cudurada
Haddii dhirta ay leeyihiin dhibco iftiin ah oo burooyinkeeda ah, oo tufaaxuna waa la qabsadaa oo ma furna - waxaa laga yaabaa in miisaanku uu ku dhaco caabuq fayras ah. Xaaladdan, geedka waa in la burburiyaa, iyo carrada lagu daaweeyo xal manganese ah.
Jadeecada ubaxa waxay saameyn kartaa fungus: waxay noqdaan kuwo jilicsan, oo qaababka muuqaalku u muuqdaan hoos miisaanka. Wixii ka hortagga cudurada fangas, waxyaabaha for beerto waa in la qalajiyo iyo loola dhaqmo hab gaar ah.
Kordhinta guryaha ayaa ah midka ugu fudud, laakiin khibrad xiiso leh. Haddii aad raacdo xeerar yar, ubaxyadaas jilicsan ayaa ku siin doona farxad iyo niyad jabka.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Crocus 2019